Doodda madaxtinimada: Hadalladii ugu kululaa ee ay isweydaarsadeen Trump iyo Biden | Radio Hormuud
Microphone-kii la xirayay, ama hanjabaadii aheyd in la xiri doono, ayaa u muuqanaysay inay shaqaysay. Dooddii labaad ee madaxtinimada, ayaa musharrixiinta Donald Trump iyo Joe Biden waxa ay ahaayeen kuwo aad isu qabanaya, umana qas iyo buuq badneen sidii tii hore.
Kaddib dooddii koobaad oo uu buuq hareeyay, markaas oo Donald Trump uu haddba hadalka ka soo dhexgalayay ninka ay doodayaan ayaa waxaa laga yaabaa in middaas ay taageero ka weecisay markii la fiiriyo aaraa'dii markaas kaddib la qaaday, madaxweynaha ayaa si la dareemi karo codkiisa hoos ugu dhigayay, taasna waxa ay ka dhigtay mid dooddiisa bannaanka soo dhigan kara.
Ugu dambayntii dooddii koobaad ee buuqa badneyd ayey u badan tahay in lagu xusi doono buugaagta taariikhda. Iyadoo aaraa'da la uruuriyay ay muujinayso in inta badan dadka Mareykanka ay go'aan ka gaareen cidda ay u codaynayaan - oo misana in ka badan 45 milyan oo qof ay codkooda hore u dhiibteen - ayaa waxa ay u muuqataa fursadda saameyn wayn ay dooddii xalay reebto ay tahay mid aad u yar.
Kooxda u ololaynaysa Trump ayaa waxa ay ka cawdeen in dooddan ay aheyd in diiradda lagu saaro siyaasadda arrimaha dibadda - malaha si uu madaxweynaha u helo fursad uu ku soo bandhigo guulaha uu ka gaaray Bariga Dhexe, ganacsiga iyo Suuriya, kaddibna uu Biden ku dabadhigto xiriirka ganacsi ee uu wiilkiisa la leeyahay Shiinaha.
Taa badelkeeda, doodda, sida kuwii ka horreeyay, waxa ay ku bilaabatay fayraska safmarka ah ee korona - kaas oo sida ay aaraa'da muujiyeen ah mowduuc ay dadweynaha Mareykanka danaynayaan.
Donald Trump, ayaa markale soo hadalqaaday arrinta tallaalka isagoo sheegay inuu diyaar ku noqon doon "todobaadyo gudahii". Waxa uu laf ahaantiisa qiray awoodda dawooyinka cusub ee lagu daweeyo cudurka isagoo ku faanay in haatan uu "difaac" jireed leeyahay.
Kaddib markii ay hadalka isku celceliyeen, ayuu Trump ku soo bandhigay rajo ah in xaaladdu ay ka soo rayn doonto oo ganacsiyada iyo iskuulladana dib loo furi doono. Mar uu Trump sheegay in dadku ay "baranayaan sida loola noolaado" cudurka, Biden ayaa arrintaas markiiba la booday.
"Dadku waxay baranayaan sidii ay cudurkaas ula noolaan lahaayeen?" ayuu waydiiyay. "Dadku waxay ogaanayaan in cudurkaas ay u dhimanayaan."
Mar, ayuu Trump soo bandhigay jawaab aheyd "maynu howshan ka gudubno". Taas oo ah in madaxweynuhu uu si cad u doonayay in mowduuc kale la galo.
Waxa uu ku andacooday in Biden uu shakhsiyan ka faa'iiday heshiisyada ganacsi ee wiilkiisa uu la galay Ukraine iyo Shiinaha, isagoo soo hadalqaaday warar xog la sheegay in laga helay kumbuyuurta laptop-ka ee Hunter Biden.
Arrintaas oo madaxweynaha ku qasabtay inuu waqi ku qaato sharaxaadda sida uu dhab ahaantii "u bixiyay" malaayiin doolar oo canshuur ah iyo inuu sheegay in maalin uun uu shaacin doono warqadda canshuurta uu ku celiyo.
Tusaale ahaan, markii wax laga waydiiyay siyaasadda uu maamulkiisa ku kala soocay carruurta iyo waalidiintood aanan sharciga haysan, Trump ayaa iskudayay inuu sheekada u weeciyo goobaha dadka lagu hayo, taas oo uu ku tilmaamay "qafis" uu sameeyay maamulkii Obama oo uu ku hayay carruur yaryar oo aanay cidina la socon.
Biden oo arrintaas aad uga carooday, ayaa hoosta ka xariiqay in carruurta uu Trump xiray ay waalidiintood la yimaadeen, siyaasaddaasna ay Mareykanka "sumcaddii ka dishay".
Codbixyayaal badan oo Ameerikaan ah, ayaa codka carruurta waalidiintood laga kaxaystay ee ooyaya ay weli u tahay wax aanan maskaxdooda ka go'in.
Jawaabta Trump ayaa aheyd in carruurtaasi "si wanaagsan loogu xanaaneeyay, xarumo nadiif ah" arrintaas oo dooddiisa aanan xoojin.
Waxa uu Biden ku weerraray maalgelintiisii sharciga dambiyada ee 1990-meeyadii, aarintaas oo horseedday in ay aad sare ugu kacaan dadka madow ee Mareykanka ee xabsiyada ku jira.
Biden markii uu bilaabay inuu ka hadlo qorshihiisa wax lagu badelayo, ayuu Trump oo aad mooddo inuu si quwad badan u hadlayo, waxa uu su'aal galiyay sababta madaxweyne kuxigeenkii hore uusan wax badan u qaban markii uu ka hoos shaqeynayay madaxweyne Barack Obama.
"Waa uun hadal waxa ay siyaasiyiintaan hayaan ee ficil ma jiro," Trump ayaa yiri. "Maxaadan howshaas u qaban? Sideed sanadood ayaad haysatayee."